Fetin’ny mpifankatia : hanome sehatra ireo hiram-pitiavana ny “Smooth Night Love” | NewsMada
Fetin’ny mpifankatia : hanome sehatra ireo hiram-pitiavana ny “Smooth Night Love”
Hetsika miavaka amina toerana miavaka. Izay no tanjona amin’ny “Smooth Night Love”. Hamerina ireo hiram-pitiavana malaza ireo mpanakanto nosafidina manokana.
Hetsika miavaka amin’ny lafiny maro. Tanjon’ny Ivenco izany ho an’ny “Smooth Night Love”. Hotontosaina ny 13 febroary izao manomboka amin’ny 8 ora alina izany. Hampiavaka voalohany ny hetsika ny toerana hanatontosana azy. Nosafidiana manokana mantsy ny ao amin’ny Maz’too, etsy amin’ny Akoor’Digue (Score Digue), noho izy vaovao, manasongadina ny zavakanto ary manome ilay haingony kely ilain’ny mpanjifa. Faharoa, mpanakanto maromaro, notsongaina manokana, no hamelona sy hamerina ireo hiram-pitiavana vahiny sy malagasy, mandritra izany.
Patchrick sy Lizy Tantely eo amin’ny feo. Mpanakanto fantatra kokoa eo amin’ny fanarahana ireo mpihira sy tarika malaza izy ireo. Malaza amin’ny famerenana hirana mpanakanto vahiny sy malagasy ihany koa anefa. Hanaraka azy ireo eo amin’ny zavamaneno ireo mpitendry manana ny maha izy azy amin’izao fotoana izao: Zo Tantely (vata maroafitsoka), Gérard Ratsimiseta (gitara), Dasy (amponga maroanaka), Hents (gitara beso) ary Anjaniony (saxophone). Hanampy sy hanaingo ity fiarahana hafakely ity i Arison Vonjy.
Hiran’ireo mpanakanto malaza
“Hiram-pitiavana notsongaina manokana, hifanaraka amin’izay fetin’ny mpifankatia izay no homanin’ireto mpanakanto ireto. Ezahana hifanaraka amin’izay tena handrasan’ny mpankafy amin’io fotoana miavaka io izany”, hoy ny fanazavan’ i Andry Mahery, tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Ivenco.
Hitambolona indray ny sanganasan-dry George Benson, Lionel Richie, Michael Jackson, Mariah Carey, Céline Dion, Whitney Houston, sns, mandritra io fiarahana io. Haharitra hatramin’ny 11 alina eo ho eo ny tena seho, raha ny filazan’ny mpikarakara. Tsy ihanona amin’ny seho an-tsehatra fotsiny anefa, fa hanomboka ny antoandro efa hianoka anatin’ny mozika sy ny fetin’ny mpifankatia ny eny amin’ny Akoor’Digue. Hampiditra tsikelikely ny hafanana i DJ Nitt Rolys ny atoandro, ary hiverina amin’ny 5 ora hariva. Mbola izy ihany koa no hanakatona ny fiarahana farany amin’io fotoana io. Ankoatra izay, manomana kilalao hanomezana loka ireo mpifankatia ho avy amin’io fotoana io koa ireo magazay ao amin’ity toeram-pivarotana goavana vaovao ity.
“Fanombohana ity, fa mety hisy ny tohiny satria ny hahatonga ny toerana ho sehatra ho an’ny zavakanto ihany koa no tanjona”, hoy hatrany ny nambaran’ny mpikarakara. Raha tsiahivina, tsy vao voalohany akory, fa efa andiany fahefatra izao ny “Smooth Night”. Efa nitety toerana, kanefa fahombiazana hatrany izany, noho ny fitiavan’ireo mpankafy. Aorian’ny “Smooth Night Love”, efa manomana sahady hetsika goavana kokoa ny Ivenco.